प्रदेश6| suryakhabar.com
विश्वकपः पहिलो खेलमा इङ्ल्यान्डले गर्यो पनामाविरुद्ध गोलको बर्षा, बाँकी खेलमा को–को आमने सामने ?
स्वायत्ततासहितको संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छः सभामुख महरा
चारैतिर घेराबन्दीमा परेपछि काँग्रेस सभापति देउवा रणनीति तयार गर्न सौराहा रिसोर्टमा !
Home प्रदेश प्रदेश 6
on: June 24, 2018 In: प्रदेश 6Tags: No Comments
रुकुम । स्थानीय सरकारले गरेका विकास निर्माणको कार्यलाई नेपाली काँग्रेसको छायाँ सरकारले अनुगमन गर्न शुरु गरेका छन् । बाँफीकोट गाउँपालिकाअन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा भएका भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाका...	Read more
नेपालगञ्ज । ‘नेपालगञ्ज नेपालको पर्यटकीय द्वार: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र व्यापार विकासको मूल आधार’ भन्ने नाराका साथ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तेस्रो नगरसभा आजदेखि शुरु भएको छ । नगरस...	Read more
on: June 23, 2018 In: प्रदेश 6Tags: No Comments
कालीकोट । कुनै जमानामा गाईभैँसीको आहार हुने गरेको अल्लो अहिले ग्रामीण जनताको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बन्न थालेको छ । यस जिल्लामा महिलाले अल्लोबाट कपडा बनाउन थालेपछि अल्लो आयआर्जन माध्यम बनेक...	Read more
सुर्खेत । मुलुकको विकास र समृद्धिमा सामाजिक कुरीतिले पारेको नाकारात्मक प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले सुर्खेतमा कानूनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको छ । हिमालयन बाइबल अध्ययन प्रतिष्ठान क...	Read more
जाजरकोट । यहाँको कुशे गाउँपालिका–९ पैकका ५१ वर्षीय कालीबहादुर रोकायलाई गाउँघरमा शुद्ध तोरीको तेल पाउन छोडेकामा निकै चिन्ता लाग्ने गरेको छ । बजारमा बेच्न राखेका र मिलमा पेलेका तेल शुद्ध नहुने...	Read more
on: June 22, 2018 In: प्रदेश 6Tags: No Comments
जाजरकोट । बारेकोट गाउँपालिका–५ तोलखानका ४९ वर्षीय गोविन्दबहादुर सिंह पेसाले पशु प्राविधिक हुन् । एकतीस ३१ वर्षदेखि पशु प्राविधिकको रूपमा सरकारी सेवामा कार्यरत उनी गत ५ वर्षदेखि जाजरकोटका जंग...	Read more
किटु वस्ती, दैलेख । एउटा ठूलो ढुंगे ओढारभित्र गाँस, बास मात्र नभई व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेर यहाँका एक ज्येष्ठ दम्पतीले ‘जहाँ ढुक्क त्यही सुख’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरिदिएका छन् । दैलेख जिल्ल...	Read more
on: June 21, 2018 In: प्रदेश 6, शिक्षाTags: students-school-sport-ill-jagarkotNo Comments
जाजरकोट । यहाँको छेडागाड नगरपालिका–१२ स्थित नारायणी माविमा एक हप्तादेखि विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेपछि पठनपाठन अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म विद्यालयमा कक्षा ७ देखि कक्षा...	Read more
on: June 17, 2018 In: प्रदेश 6, शिक्षाTags: तीन बर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गरिनेNo Comments
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई लक्ष्यबिन्दुमा पु¥याउने नीति लिएको छ । साक्षरताको हिसाबले ५८.२५ प्रतिशत रहेको विद्यमान अवस्...	Read more
on: June 17, 2018 In: प्रदेश 6Tags: कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सडक र विद्युत्No Comments
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा सडक र विद्युत्लाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकलाई राज्यको हरेक सेवासुविधाको पहुँचमा ल्याउने प्रमुख...	Read more
on: June 16, 2018 In: प्रदेश 6Tags: No Comments
हुम्ला । सिमीकोट उड्डयन कार्यालयमा आज बिहानदेखि हवाई भाडा महँगीको विरोध गरी धर्ना दिइएको छ । धर्नाले गर्दा यात्रुहरु विमानस्थलमै अलपत्र परेका छन् । हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्गे...	Read more
on: June 15, 2018 In: आर्थिक, प्रदेश 6Tags: कर्णालीको बजेट रु २८ अर्ब २८ करोडNo Comments
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटम...	Read more
on: June 14, 2018 In: प्रदेश 6Tags: No Comments
दाङ । प्रदेश नं ६ अन्तर्गत सुर्खेतको हात्तीखालमा निर्माण शुरु भएको भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय आयोजना ९विविडिएमपी० को सुरुङ मार्ग निर्माणको काम करीब ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । चाइना ओभर...	Read more
on: June 13, 2018 In: आर्थिक, प्रदेश 6Tags: कर्णाली प्रदेशमा २३ अर्बको बजेट ल्याइँदैNo Comments
सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको लागि करिब रु २३ अर्बको बजेट प्रस्तुत हुने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी असार १ गते प्रस्तु...	Read more
on: June 11, 2018 In: प्रदेश 6Tags: No Comments
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आव २०७५/७६ का लागि असार १ गते उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने बताए । प्रत्येक महिना यहाँका पत्रकारहरुसँग गरिने ‘नियमित भेटघाट’ कार्यक्र...	Read more
सुर्खेत । नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय सरकारको नक्कल सिवाय फरक नभएको बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार प्...	Read more
on: June 10, 2018 In: प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3, प्रदेश 4, प्रदेश 5, प्रदेश 6, प्रदेश 7Tags: No Comments
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीको विद्यमान संरचनालाई प्रादेशिक तहमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रादेशिक तहका लागि नेपाल प्रहरीको नयाँ संरचनाअनुसार तीन हजार...	Read more
on: June 07, 2018 In: प्रदेश 6, स्वास्थ्यTags: कर्णाली प्रदेशमा ११० नयाँ कुष्ठरोगी फेलाNo Comments
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ११० जना नयाँ कुष्ठरोगका बिरामी फेला परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १० वटा जिल्लामा उक्त संख्यामा नयाँ बिरामी फेला परेका हुन् । एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य संस्थ...	Read more
on: June 05, 2018 In: पर्यटन/संस्कृति, प्रदेश 6Tags: सुर्खेतमा प्रदेश स्तरको विमानस्थल बन्नेNo Comments
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल बन्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रुपमा निर्माण हुने भनिएको विमानस्थलमा बढी लागत लाग्ने भएकाले अहिले प्रादेशिक विमानस्थल...	Read more
on: June 05, 2018 In: प्रदेश 6, समाचारTags: No Comments
बेनी, म्याग्दी । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–१, कुहूँको शिरानमा कुहुँ मालिका मन्दिर नजिकै रहेको १७ औँ शताब्दीको ऐतिहासिक सुरुङमार्ग भेटिएको छ । जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो सुरुङमार्ग भए पनि प्र...	Read more
पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा